To: देशप्रेमी भावना व्यवहारमा देखाऊ
विमला अधिकारी - ‍क्याम्पसी ड्रेसमा साथीसँग रम्मिदै
बाग्मती किनारको छेऊमा एक हातले नाक थुन्दै
हातको रित्तिएका लेज र रेड बुलका बोतल खोलामा फाल्दै
ऊ बढो प्रकृतिप्रेमी पारामा भन्छ
सरकारले बाग्मती सफा गरेन।
जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्ने भने झै
चटपटे र पानीपुरी दिने दाईलाई
ऊ हेपाइको शैलीमा भै’या पुकार्छ
अनि बढो देशप्रेमी पारामा भन्छ
सरकारले सीमा सुरक्षा गरेन।
लामो लाईन कुर्न नसकेर
नेता र मन्त्रीको सोर्स लाउँदै
कर्मचारीलाई घुस दिँदै
ऊ आफ्नो काम चाँडो निम्त्याउँछ
र कानुन पालक झै भन्छ
देशमा कानुन व्यवस्थै भएन।
सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगको विश्वास गुम्न नदेऊ
जयराम पुडासैनी, बौद्ध-६ काठमाडौं - द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढि थलिएका जिल्लाका पीडित नै स्थानीय आयोगको सम्पर्कमा आएका छैनन्। कतिपयले यस विषयमा थाहै पाएका छैनन् भने कतिपयमा विश्वास गुमेको छ। विगतमा लिइएको लगतअनुसार क्षतिपूर्ति र कारबाहीको प्रक्रियासम्म पनि सुरु गर्न सकको भए आयोगमाथि यो हदको विश्वास गुम्ने थिएन। ढिलै भए पनि आयोगले काम थालेको छ। आयोगको सम्पर्कमा आएका कतिपय जिल्लाका पीडितहरू अझै पीडिकलाई कारबाही हुनेमा शंका गरिरहेका छन्। आयोगले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न कार्य तालिकासमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। आयोगले पीडितको निको हुँदै गरेको घाउमा विवरण लिने नाममा फेरि नुनचुक छर्ने काम मात्र भयो तर यसलाई पूर्ण रूपमा ठीक पार्न असफल भयो भने त्यसले समाजमा पार्ने नकारात्मक असर हामीले कल्पना गरेभन्दा भयावह हुनेछ।
झा जी, खस आर्य समुदायलाई सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ म नेवारले दिँदैछु
सर्जु महर्जन - खोक्रो अधिकार र खोक्रो राष्ट्रियताको पक्षमा म पनि छैन। जसरी विदेशिने रहर तपाईँलाई छ, लाखौं अरु युवामा पनि छ। यहाँ मधेशी वा खस आर्य भनी विभेद गर्नु आवश्यक छैन। काठमाडौंवासीहरु भ्रममा हैन, चेपुवामा परेका छन्। मधेशको सारहीन आन्दोलन र शासकवर्गको चर्को राष्ट्रियताको नाराका बीचमा। मधेशलाई संविधानबाट हक अधिकार दिने कोशिश भएको छ। जातीयताकै कुरा गर्ने हो भने भूकम्पपीडित खस आर्य जनजाति समुदायलाई अन्यायमा पार्ने सरकार र कर्मचारी पनि यहि खस आर्य जनजाति समुदाय नै हो। तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्, मधेशीलाई पहाडीले अन्याय गरेको होइन, सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरुले दुःख दिएको हो। ती सरकार वा कर्मचारीतन्त्र मधेशी समुदायका मानिसहरुले नै भरेपनि सर्वसाधारणले दुःख पाइरहन्छन्। मधेशका सरकारी कार्यालयहरुमा के मधेशी नागरिकले मधेशी कर्मचारीबाट बिना घूस काम पाउन सकेको छ?
सरकार आश नमार है!
विवेक अर्याल - आँधी आउछ। पानी आउँछ। हाम्रो त जसो-तसो चल्छ। कंक्रीटको घर छ,ढलानको छानो छ। जाडो हुदा ओड्ने सिरक छ। आङ ढाक्नलाई रोजी-रोजी कपडा पनि होला। खाना पकाउनलाई जसो-तसो ग्यास छ। बोरा भरि चामल होला। नजिकै तरकारी पसल पनि छ। लाइटर प्याट्ट बाल्यो,खाना सजिलै पाक्छ।
अष्ट्रेलियामा हराएका देवर खोजिदिन आग्रह
अञ्जु देवकोटा - मेरो देवरको खोजी गरिदिन म नेपाली दूतावास, एनआएन लगायत अष्ट्रेलियामा काम गरिरहेका संस्थासँग आग्रह गर्छु। म आशावादी छु, हजुरहरुको सहयोगले कुनै पिताको खुसी फर्कन सक्छ। एउटी बहिनीले दाजुको हातको टिका लगाउन पाउनेछिन्।
शिक्षा नियमावली कार्यान्वयन नहुनु लज्जास्पद
निरेन्द्र कुँबर, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति, अध्यक्ष - २०६३ पुस १४ गते संसोधन भएको शिक्षा ऐन अहिले पनि जिवितै छ र शिक्षा नियमावली पनि कार्यान्वयन भएको छ। त्यसैले अस्थायी शिक्षकहरु कार्यरत छन्। तर शिक्षा ऐन बनेको ९ वर्ष २ महिना अर्थात १ सय १० महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दुखद पक्ष मात्र होइन,लज्जास्पद विषय पनि हो।
उठ उठ साथीहरू नयाँ बिहान छाइसक्यो
दुर्गा दाहाल आचार्य - उठ उठ साथीहरू
नयाँ बिहान छाइसक्यो
नयाँ काम सुरू गर्न
नयाँ वर्ष आइसक्यो।
बाल्नेगरी आएको छ ।
टाल्नेगरी आएको छ ।
नयाँ सालमा बिहानिको
सूर्य किरण छाइसक्यो।
नयाँ बर्ष आइ...
यति कमजोर छ र हाम्रो सार्वभौमसत्ता!
जयराम पुडासैनी - के विश्वको उत्कृष्ट दाबी गरेको संविधानबारे कसैले पनि टीका–टिप्पणी गर्नै नपाउने हो ? अतः इतिहासकै सबभन्दा घातक हमला भएझैँ ओली र प्रचण्ड कमरेडहरू कोकोहोलो मच्चाउँदै छन यसले सबै नेपाली र नेपालप्रेमीको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर
जयराम पुडासैनी - भारत ईयूूलाई प्रभावमा पारेर नेपालको संविधानबिरुद्ध पुनः अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बटुल्ने प्रयासमा लागेको छ। मोदीले नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउन ईयूूको सहारा लिएका छन्। नयाँ संविधान निर्माणमा आफूसँग कुनै पनि सल्लाह नलिएकोमा असन्तुष्ट भारतले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा पनि पछिल्लो समयमा नेपालको मानवअधिकार, संविधानका बिषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
पोर्नस्टार बन्छु भन्ने अर्चनालाई मिडियाले उचाल्यो
सम्झना पौडेल - नेपाली मिडियामा भट्टी पसलमा रंगीन क्लबमा जन्मिएका अर्चनाको खोजी गरी रचनात्मक काम गर्ने ऊर्जा थप्नु पर्छ। न कि कहिले हेर्न पाउँछौ जस्ता ऊर्जाशील प्रश्न। सबै दोष मिडियालाई दिनुअघि एक पटक आफ्नो गाउँलाई फर्केर हेर्न जरुरी छ। राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकको संक्रमणकालीन स्थितिको फाइदा लुट्ने मिडिया होइनन्। मिडियालाई प्रयोग गर्नेका जालो सरकार एवं राज्य संचालकसँग जोडिएको छ। राज्यले दर्ता गर्ने मिडियालाई राज्यले गुणस्तर तथा स्तरोन्नतिका लागि लगाब दिँदैन। मिडिया समाज र देशको लागि उत्तरदायी हुनु पर्छ। नेपालमा मिडियामा ब्यापारिक सोच बढी छ।
स्कुल यातना घर कि शिक्षालय?
जयराम पुडासैनी, बौद्ध-६, काठमाडौं। - सुर्खेतमा सात वर्षीया बालिकाले एकजना शिक्षिकाको पिटाइबाट एउटा आँखाको ज्योति गुमाएको घटना बाहिर आएको छ। शिक्षिका दोषी छन् या छैनन त्यो छानविनबाट पत्ता लगाउनुपर्छ। तर स्कुलमा गएका बालबालिका सकुशल घर फर्किन्छन् कि फर्किंदैनन् भन्ने भय नै शिक्षाको मूल्य र मान्यताविरुद्धको कुरा हो। स्कुलहरूबाट, हरेक वर्ष एउटा प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ ‘हामी विद्यार्थीमाथि कुनै पनि खालका शारीरिक यातनाविरुद्ध छौं।’ हरेक वर्ष नै कतै न कतै शिक्षकका मनमा कलिला बालबालिकाले शारीरिक यातना पाएका मात्र हैनन्, शरीरका संवेदनशील अंग भंग भएका या तिनका शक्ति गुमेको घटना बाहिर आउने गरेका छन् लुकाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि। पक्कै पनि जति घटना बाहिर आउँछन्, ती समग्र घटना या संख्याका केही अंश मात्र हुन्। स्कुलहरूमा हुने यस्ता यातना र भयले विद्यार्थीका कलिला दिमागमा व्याप्त भएमा उनीहरूको शिक्षा ,केही जान्ने रुचि अनि क्षमतामा ह्रास आउने गर्छ।
किन भएन चीनसित इन्धन सम्झौता?
जयराम पुडासैनी - भारतीय नाकाबन्दीपछि उत्पन्न संकट टार्न चीनसँग इन्धन सम्झौताको बिषय प्रबेश गराइएको थियो। सरकारले तयारी पनि थालेको थियो। तर अन्तिम समयमा यसलाई रोकेपछि प्रश्न उठेको छ। नाकाबन्दीमा इन्धनको चरम अभाव खेपेको नेपाली जनताले यसपटक एउटै देशको एकाधिकार तोड्नेगरी चीनसँग इन्धन आयातसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएका थिए। हुन सकेन।
प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रै ध्वजावाहक चढेको भए के बिग्रन्थ्यो?
विजय लामा - ‘के बस्नु यस्तो देश मा जुन देश मा नेताहरुले राष्ट्रिय ध्वजाको कदर गर्न जान्दैनन्। धिक्कार्छु आफ्नो कर्मलाई यस्तो अवस्था आउँदा पनि केही गर्न नसक्दा।
कहिलेसम्म हेर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू? कहिलेसम्म सहनुपर्छ हामीले यो सबै पीडाहरू?
राष्ट्र र नेपालीहरूलाई माया गर्ने नेताहरू कहिले आउलान्? नेताहरूले जे गरेपनि ठीक त?
सिन्डिकेट जरैदेखि उखेलौं
केदारनाथ नेपाल - यदि सरकारले जनता र व्यवसायी दुवै पक्षको हित चाहन्छ र सबैलाई गरिखाने वातावरण दिन चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले सिन्डिकेट लाद्ने उदेश्यले खोलिएका संघसंगठन खारेज गराउनु पर्छ। सिन्डिकेट प्रथाको जरैबाट अन्त्य गरिनुपर्छ तबमात्र देशमा सबैले गरिखाने वातावरण बन्छ।
गगनले हार्ने चुनाव किन लडे?
उत्तम धमला - आखिर हार्ने गरी उम्मेदवारी किन दिनुभयो? के तपाईं जस्तो नेताले त्यसको विश्लेषण गर्नुभएको थिएन? या विश्लेषण गरेर हार्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै भावी बार्गेनिङको निम्ति उम्मेदवारी दिनुभएको थियो? तपाईंबाट आम युवाहरुले जवाफ चाहिरहेका छन्। हो चुनावी मैदानमा उत्रेपछि हारलाई स्वभाविक रुपमा लिन सक्नुपर्छ। तर तपाईंलाई स्वभाविक लागेपनि, हामी आम युवाहरुलाई भने यो स्वभाविक लागेको छैन दाइ। एउटै प्रश्न सबैको मनमा छ, आखिर गगनले हार्ने चुनाव किन लडे त?
कांग्रेस नेतृत्वका चुनौतिहरू
दुर्गा सापकोटा - मोर्चागत भन्दा पार्टीगत एकताको खाँचो सिङ्गो मुलुकलाई आवश्यक छ त्यसकारण पार्टी भित्रको एकताले मात्र यी सबै कुरा सम्भव छ भन्ने अवका निर्वाचित पदाधिकारीहरुले बुझ्नैपर्छ। सैद्धान्तिक स्पष्टतामा मात्र दृढ देखिएको हिजोको कांग्रेसमा ब्यवहारिक र समय सापेक्ष परिवर्तित हुँदै वैचारिक अडिक आवश्यक छ जसले गर्दा आफ्नो स्वभिमान र अस्तित्व हिजोका दिनमा झै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरु भन्दा एक कदम अगाडि रहेको आफ्नो शाख बचाइ राखोस्।
न्याय खोज्दै नेपाल आएकी भारतीय चेली
लोकेश साउद - बहादुर छोरालाई साथमा लिएर नेपाल फर्किए। दिपालीलाई थाहै नदिई दुधे बालक छुट्दाको पीडा उनलाई मात्र थाहा थियो। बालखका लागि कानुनी सहायता लिन उनी जिल्ला अदालत महाराष्ट्रको ढोकासम्म पुगिन्। अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै छोराको पालन पोषणको जिम्मा दिपालीलाई दिन आदेश गर्यो। त्यसपछि हाई कोर्टले पनि सोही फैसलालाई निरन्तरता दियो। जसको एक प्रति फोटोकपी बोकेर उनी नेपाल आएकी हुन्।
कांग्रेसका उमेद्वार र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई केही प्रश्न
निरञ्जन श्रेष्ठ - नेपाली कांग्रेसको २०१२ सालको वीरगञ्ज अधिवेशनबाट बीपीको नेतृत्वमा पारित भएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद सैद्धान्तिक आधारशीलालाई के अहिलेको परिवर्तित परिवेशमा १३ औं अधिवेशनले पुनर्व्याख्या, परिमार्जन वा संशोधन गर्न आवश्यक ठान्ला कि नठान्ला?
कहिले सुध्रिएला कांग्रेस?
जयराम पुडासैनी, बौद्ध–६ काठमाडाैं - तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर अघि बढ्न सके स्वयं कांग्रेसलाई मात्र नभएर समग्र लोकतन्त्र र मुलुकलाई नै हितकर हुनेछ। समग्रमा कांग्रेसीहरुले गुटगत स्वार्थलाई भन्दा दलको वैचारिक दृढतालाई जीवन्त राख्ने प्रण गर्न जरुरी छ। नीतिबिनाको व्यक्तिगत गठबन्धनले कांग्रेस धराशायी बन्दै गएको छ र त्यो नै चिन्ताको विषय हो। विगत २० वर्षदेखिको नीतिगत विचलनबाट कहिले सुध्रिन्छ, कांग्रेस?
दिल्लीमा स्वीच थिचेर नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य!
केदारनाथ नेपाल - भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी खुलेको छ। नाकाबन्दीको समयमा आम नेपाली जनताले निकै सास्ती बेहोर्नुपर्यो। देशमा कालोबजारी मौलायो भने देशको अर्थतन्त्र झण्डै धरासायी स्थितिमा पुग्यो। यसबाट हाम्रा नेताहरुले पाठ सिकेर आत्मनिर्भर बन्नुको सट्टा उल्टै भारतबाट विद्युत ल्याउने सम्झौता गरी नेपाललाई झन् झन् परनिर्भरताको बाटोमा धकेल्दैछन्। जलविद्युतको क्षेत्रमा स्वदेशमै अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै दिल्लीमा स्वीच थिचेर नेपालमा लोडसेडिङ घटाउन लागि परेका छन्।
कांग्रेसी हो! बनाउ गगन थापालाई महामन्त्री
जयराम पुडासैनी, बौद्ध-६ काठमाडौं - हामी नेतृत्वमा जान पाएनौ भन्दै ४५ वर्षसम्म नेविसंघमा बस्ने महानुभावहरु अझै भन्नु पर्दा च्याउरी गाले युवा नेताहरु हो सक्छौं भने युवा नेतृत्वका लागी महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएका गगन थापालाई जिताएर हेर किन कि मान्छेका दोष गुण सामान्य कुरा हुन्। कदर क्षमताको गर्नुपर्छ, भिजनको गर्नु पर्छ र नेपाली कांग्रेससमा उनी युवामा एक नम्बर नेता हुन महामन्त्री बन्न लायक ऊ संग यो दुबै छ जसले आफ्नो राजनीति गर्ने समय अब १५ वर्षमात्र बाँकी छ भनेर समय तोकेर राजनीति गरेको छ जसले गर्दा पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने अवसर धेरैलाई मिल्ने छ।
विमानस्थललाई मानव तस्करी क्षेत्र नबनाउँ
जयराम पुडासैनी - यसबारे तत्काल सत्यतथ्य पत्ता लगाई उचित कारबाही भएन दोषीविरुद्ध भने यसले आम आक्रोशको वातावरण निर्माण गर्नेछ। यो घटनामा नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संयन्त्र जवाफदेही हुनैपर्छ। त्योसँगै पछिल्लो मानव तस्करी अर्थात् सात युवतीको रहस्यमय तरिकाले गायब हुनुमा कस्को संलग्नता छ छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्छ।
मेटिदिउँ सीमा रेखा
सुरेश बादल - म त्यही नाक चुच्चे हुँ
जनै भिरेर टुपी पाल्ने
पहाडिया बाहुन हुँ।
सरकार! तिमी के गरिरहेका छौ?
प्रतिक्षा रेग्मी - यहि समाजमा एउटा बलात्कारी खुलेआम हिडेको छ। एउटा हत्यारा निर्दोष जस्तै गमक्क पर्दै सानको साथ हिडेको छ। उनीहरुको लागि न सजाय छ न कुनै कानुन छ तर पीडा पाउनेले झन धेरै पाइरहेका छन्। एउटा युवा विदेश गएर असुरक्षित हुन्छ, श्रीमती अनि छोराछोरी निर्दोष हुँदाहुँदै पनि ज्यान गुमाउँछन्। यहाँ त कोहि पनि सुरक्षित छैनन्। जब आम जनता नै सुरक्षित छैनन भने, जब ज्ञान र प्रमाणपत्रको मूल्यांकन हुँदैन भने, जब पसिना र रगतको अपमान हुन्छ भने, कसरी विश्वास गर्न सक्छौं हामीले यो सरकार जनताको लागि केहि गरिरहेको छ भनेर?
कहाँ गयो इन्धन?
जयराम पुडासैनी, बौद्ध-६ काठमाडौं - त्यहाँ त ठूला बडा हाकिमको मान्छेले जति नि पाउँछन्, सर्वसाधारण उपभोक्ता गाली खान्छ लाइन बस्छ खालिहात फर्कन्छ। जनताले तेल नपाउने, ठूलाबडाले आदेशका आधारमा तेल पाउने?’ आर्मीले गाडिभरि जर्किनका जर्किन तेल भरेर कहाँ लैजान्छ?’ के ती पम्पहरुमा अनुगमन गर्नु नपर्ने कि नपाउने हो? सरकारी पेट्रोल पम्पमै मिलेमतोमा कालोबजारी हुँदा नियन्त्रणमा निगम उदासीन भएको छ। उनीहरुले अत्यावश्यक सेवाका नाममा तोक आदेशमा तेल दिँदा कालोबजारी बढेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अाठ प्रश्न
राम ढुंगाना - जनताका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास हुन्। जनता भोकभोकै खालि पेट खुल्ला आकाशमुनि सुतिरहेका छन्। चिसोले गरिब जनता मरिहेका छन्। पहिला ती कुरामा ध्यान दिने कि धरहरा बनाउन चटारो गर्ने ?
पदक विजेता खेलाडीको बिजोग!
जयराम पुडासैनी - बिरामी परेर अलपत्र हुँदा पनि टिम व्यवस्थापनले कुनै सोधीखोजी गरेन अभिभावकसँग खर्च मगाएर काठमाडौं आउँदै छन हाम्रा पदक बिजेता खेलाडी नेपालबाट उसुका लागि १६ जना खेलाडी भारत गएका थिए । उनीहरुमध्ये १२ जनाले देशका लागि पदक जितेका छन् ।
खेलाडीलाई विभेद किन?
केशब मोहन अधिकारी - फुटबल खेलाडी रातारात सेलिब्रेटी बने। उनिहरुसम्म प्रधानमन्त्रीदेखि बिभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित मानिसको बधाईका ओइरो लाग्यो। खासमा पुरुष फुटबलको स्वर्ण पदक सक्कली र अरु खेलको नक्कली पक्कै थिएन। बाँकी दुई खेलाडी फुपु लाह्मु खत्री र निमा घर्ति मगरले पनि सानोतिनो मिहनेत र पसिनाले स्वर्ण जितेका थिएनन्।
कहिले पाइएला तेल?
केदारनाथ नेपाल - भारतीय नाकाबन्दी खुलेको दुईसाता पुग्न लागिसक्यो तर बजारमा अझैपनि इन्धनको अभाव कायम नै छ। पेट्रोल डिजेल लिन अझैपनि पाँच/छ घण्टा लाइन बस्नुपर्ने समस्या छ भने ग्यास लिन त हप्तौ लाइनमा सिलिण्डर राखेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ त्यो पनि आधा सिलिण्डर।
अब राजनीतिमा नवयुग!
सन्तोष चिमरिया - एन्फामा गणतन्त्र आएको कुरा आँखा झिमिक्क गर्दा नगर्दै नवयुगका नवयुगहरूले प्रमाणित गरि दिए छन।त्यो पनि ह्या सहित १ अब पालो नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरूको हो।त्यसैले आजको दिन नवयुगहरूले एउटा फुटबल म्याच मात्रै जितेका छैनन्।नवयुग कसरी र कुन स्पिरिटमा सुरु हुन्छ सिकाएका छन।